Undertones: Toy ny tosaka rano mangatsiaka ho an’ny mpampahalala vaovao ireo “sarintsarim” -pifidianana ao Nikaragoà · Global Voices teny Malagasy
The Nicaraguan government aims at controlling the narrative.
Voadika ny 25 Novambra 2021 8:16 GMT
Filoha Daniel Ortega (havanana), ary Rosario Murillo vadiny sady filoha lefitra ao Nikaragoà. Sary an'i Ricardo Patiño/Wikimedia commons.
Misy fitantaràna roa mifanohitra milaza ny antony ambadik'ireo fifidianana ao Nikaragoà.
Ho an'ny governemanta ao Nikaragoà sy ireo mpiaradia aminy, ny fandresena nahalàny indray an'i Daniel Ortega farany teo ho filoha dia manamafy ny fitantaràna manohitra ny imperialisma. Ho an'i Etazonia sy ireo governemanta eorôpeàna ary mpanaramaso mandàla ny demaokrasia, sarintsariny ireo fifidianana ireo.
Kanefa, ny mampahasarotra ireny fitantaràna ireny dia ny zavamisy hoe anaty fikorontanana ireo gazetin'i Nikaragoà manokana. Misy ihany koa ireo mpanetsika avy any ivelany, naman'i Ortega, mampiroborobo ireo fitantaràna manohana an'i Ortega noho ny tombontsoan-dry zareo manokana.
NAHOANA NO KARAKARAINA?
Notapahan'ireo manampahefam-panjakana ny fahafahan'ireo vahiny mpanao gazety hiditra any, nanaovany bemidina ireo biraon'ny mediam-panjakàna, ary nogadrainy ireo mpanohitra. Matahotra ny hiteny sy hanao tatitra ireo mpanao gazety sy loharanom-baovao, ao Nikaragoà na any an-tsesitany, mampihatra ny fanivànan-tena, miaraka amina fantsona fampielezankevitra mibahana ny saina ary tsy ampy ny fanarahamaso mahaleotena an'ireo raharaham-panjakana.
Ny Alahady 7 Novambra, nandresy ka nahazo fepotoana faninefany hiasany ho filohan'i Nikaragoà indray i Daniel Ortega, tamin'ny vato 75%, saingy nahatratra 81% ny tahan'ny tsy fandraisana anjara, araka ny angon-drakitra avy amin'ny tsy miankina. Hatramin'ny niverenan'i Ortega ho eo amin'ny fitondrana tamin'ny 2007, efa ho 30 taona taorian'ny Revolisiôna Sandinista, nihamafy ny fangiazany ny fahefana. Tsy nitsahatra niatrika sakana amin'ny fanaovany tatitra ireo mpanao gazety — ny ankamaroany dia miaina an-tsesitany — ary marobe no tsy manisy sonia intsony ny lahatsoratra avoakany noho ny tahotra ny akony. Antsokosoko ny fomba fidirana hahazo ireo loharanom-baovao ao Nikaragoà ho an'ireo mpampahalàla vaovao.
“Tsy misy fahalalahan'ny asa fanaovana gazety”
Ho an'ireo mpanao gazety, ny fitantaràna iraisana dia hoe “Tsy misy fahalalahan'ny asa fanaovana gazety ao Nikaragoà.” Atahoran'ireo mpanao gazety ny hoe voafetra ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety, na toy ny tsy misy akory ao Nikaragoà noho ny famoretana ataon'ny fanjakàna. Tamin'ny Aogositra 2021, nisy 80 ireo fanafihana mpiasan'ny fampahalalam-baovao no voarakitra. Tamin'ny Aogositra, nanaovan'ny pôlisy bemidina ireo biraon'ny gazety nikaragoaiàna mpiseho isanandro La Prensa ary nosakanana ny fanontàna printy ataon-dry zareo. Any am-ponja ny tale jeneralin-dry zareo, Juan Lorenzo Holmann.
Ho an'ireo mpampahalala vaovao dia mibaribary io fandrahonana io. “Rivo-piainana anaty horohoro” ny ao Nikaragoà, hoy ilay Nikaragoiàna mpanao gazety fantatry ny maro, Carlos F. Chamorro, tao anaty antsafa iray ho an'ny CNN niarahany tamin'i Christiane Amanpour, izay nozarainy tao amin'ny pejiny Facebook. Chamorro no manazava ny antony mahatonga ireo loharanom-baovao tsy mety hanome ny anarany any anatin'ireo antontan-kevitra satria ireo mpitarika pôlitika sy sôsialy dia gadraina na voatery mandeha sesitany. Trandraho ato izay tantara izay.
“Miteny tsy manome anarana ny olona. Saika ny mpanao gazety rehetra no manome loharanom-baovao tsy mitonona anarana ary tsy mamoaka ny anaran'ilay mpanao gazety koa ny media. Tsy misy sonia, na anarana ery amin'ny farany. Efa ratsy nandritra ny fotoana elaela, saingy mety vao mainka hiharatsy izany satria amin'izao fotoana izao [ny governemanta] dia afaka milaza fa ara-drariny ry zareo,” hoy ny fanazavàn'ny mpikaroka ato aminay momba ny ao Nikaragoà.*
Natsahatr'ireo mpanao gazety avy amina loharano media tsy miankina, toy ny Confidencial, Nicaragua Investiga, Divergentes, ary La Prensa, ny fametrahana sonia amin'ny fitantaràn-dry zareo.
Etsy ankilan'ilay tontolo, tena hafa mihitsy ny resaka.
“Fampielazankevitra hanalàna baraka daholo izay kiana atao”
Izay rehetra vaovao miiba lazaina momba ny governemanta ao Nikaragoà dia ambara ho ampahany anatin'ny fampielezankevitra iray ikendrena hanosoram-potaka ireo mpikambana ao anatiny sy ny zavabitan'izy ireo, hoy ireo Nikaragoiàna masoivoho eo anivon'ny OAS, ny Filankevitry ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'Olombelona, ary ny CELAC (fikambanan'ireo firenena ao Karabia sy Amerika Latina). Ampiasaina ho toy ny ezak'ireo mpomba ny fanjakana hanilika ny adihevitra na ny fanoherana ity fitantaràna ity, izay nofintininay ho toy izao “Tafiditra ao anatin'ny fampielezankevitra fanalàna baràka atao amin'ny governemanta daholo izay kiana atao amin'ny fitantanan'i Ortega”.
Matetika dia amin'ny fomba sarotra vakiana ity fitantaràna ity no mitsofoka any anatin'ireo media, ary indraindray maharary mampandraingiraingy.
Amin'ny lafiny mivantambantana, ny fandresena vao haigana azon'i Daniel Ortega dia ompa atao an'ireo mpanohitra azy ara-pôlitika, maro amin'ireny no voatazona am-ponja tany am-piandohan'ity taona ity. Io dia manaraka ny fitantaràna hoe “mpamadika tanindrazana ireo mpikambana anatin'ny fanoherana.” Ato ny fandalinana misimisy kokoa.
Saingy misy tantara tsy dia mivandravandra loatra. Tanaty lahatsary iray an'ny Kawsachun, media bôliviàna mpomba ny sôsialista, nozarainy tao amin'ny kaonty Twitter -ndry zareo ary nataony ho an'ireo mpamaky mahay ny teny anglisy, ireo tanora nahita fianarana avy any Etazonia no miresaka momba ny fitsidihana iray natao tany Nikaragoà mba hahitàna maso mivantana ny “revôlisiôna sôsialista.” Nomena alàlana hitsidika an'i Nikaragoà sy hanatrika ny zotram-pifidianana ireny avara-pianarana ireny, raha ireo mpanao gazety avy any Etazonia, Espaina ary ireo mpilaza vaovao avy any amin'ny media iraisampirenena hafa kosa tsy navela hiditra tao amin'ny firenena.
Young people from across the United States will be in Nicaragua as elections take place on Sunday. Here's why they decided to come. 🇳🇮 pic.twitter.com/2OOCUUUKiv
Ho any Nikaragoà ireo tanora avy amin'ny lafivalon'i Etazonia, raha ny alahady izao kosa no hatao ny fifidianana. Indro ny antony nanosika azy ireo ho avy. 🇳🇮 pic.twitter.com/2OOCUUUKiv
— Kawsachun News (@KawsachunNews) 3 Novambra 2021
Amin'ny tsy fanomezana alàlana afa-tsy ireo vavolombelona tsongatsongaina hiditra ny firenena, tanjon'ny fanjakana ny hifehy ny fitantaràna sy hampiseho ny fifidianana ho toy ny nahomby, indrindra fa taorian'ireo hetsipanoherana ny governemanta tao Nikaragoà tamin'ny 2018 sy ny fandripahana mpianatra nanaraka izay. Ato ny fandalinana misimisy kokoa.
*Tsy notononina ny anaran'ireo mpikaroka ho fiarovana azy ireo.
Amerika Latina3 andro izay